मलेसिया जाने नयाँ कामदार कामदारको लागत कति ? हेर्नुहोस् ! • raradiodarpan.com
मलेसिया जाने नयाँ कामदार कामदारको लागत कति ? हेर्नुहोस् !
मलेसिया जाने नयाँ कामदारको लागत अब कम हुने भएको छ । मलेसियाले अब कामदार ल्याउन दलालको प्रयोग नगर्ने भने संगै लागत कम हुने भएको हो ।
मलेसिया जादा करोब १ लाख ५० हजार बढी मेनपावर कम्पनीले लिने गर्दै आएका थिए । त्यो प्रक्रिया भन्दा सअहज तरिकाले खुला बजार नीति अपनाएको हो ।
मलेसियामा कामदार भर्नामा खुला बजार नीतिको आह्वानलाई विदेशी कामदारका लागि मानवअधिकारवादी समूहले स्वागत गरेको छ र यसलाई “एकाधिकारबाट बच्ने राम्रो अभ्यास” भनेको छ।
मलेसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संगठन (MHO) का महासचिव हिसामुद्दीन हाशिमले खुला बजार नीतिले पारदर्शी भर्तीलाई प्रवर्द्धन गर्न र “विशेष विशेषाधिकार भएका व्यक्तिहरूको निश्चित समूहद्वारा” नियन्त्रित सिन्डिकेटहरूलाई विदेशी कामदार भर्ती गर्नबाट रोक्न सक्ने बताए।
हालको भर्ना प्रथाअनुसार कामदारको बसाइँसराइ र भर्ना सम्बन्धी अन्य खर्च श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा कामदार माथि ऋण बन्धन लाग्ने र व्यवस्थित जबरजस्ती श्रमको परिणाम हुने गर्थ्यो ।
हिसामुद्दीनले बंगलादेश एसोसिएसन अफ इन्टरनेशनल रिक्रूटिङ एजेन्सीज (बाइरा) ले देशमा कामदारहरू भर्ती गर्न खुला बजार नीतिको लागि गरेको आह्वानमा टिप्पणी गर्दै, मान्य इजाजतपत्र भएका सबै भर्ती एजेन्सीहरूलाई सम्भावित कामदारहरू प्रशोधन गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
यसका प्रवक्ता शमीम नोमानले खुला बजार नीतिले भर्ती लागत घटाउने र कामदारमाथिको आर्थिक भार कम गर्ने बताए।
हिसामुद्दीनले भने कि एक विशेष चयन समितिले भर्ती प्रणालीको निरीक्षण गर्नुपर्छ।
“यो खुला बजार नीति भर्ती एजेन्सीहरूको लागि स्वतन्त्र र पारदर्शी आवेदन प्रक्रियाको साथ आउनुपर्दछ। छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ।
“सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गर्न र तिनीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्न एक विशेष चयन समिति नियुक्त गर्नुपर्छ।”
तर, स्थानीय कामदारलाई प्राथमिकता दिएर बजारको मागअनुसार विदेशी कामदार भित्र्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
“यो किनभने त्यहाँ अनुमानित ५००,००० स्थानीय कामदारहरू वर्तमानमा बेरोजगार छन्। भर्ती एजेन्सीहरूको संख्या सीमित गर्दा मलेसियामा विदेशी कामदारको अत्यधिक भर्तीको समस्या समाधान हुँदैन, ”उनले भने।
उत्तर-दक्षिण पहलका कार्यकारी निर्देशक एड्रियन परेराले भने कि विदेशी कामदारहरूमा एकाधिकार भएको कारण त्यहाँ कुनै निरीक्षण थिएन र भर्ती मापदण्ड सार्वजनिक नगरिएको थियो।
“यद्यपि, यदि यो खुला बजार हो भने, भर्ती निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को दिशानिर्देश अनुसार सुनिश्चित गर्न प्रतिस्पर्धा हुनेछ,” उनले एफएमटीलाई भने।
मलेशियन उत्पादकहरूको महासंघ (एफएमएम) ले पनि यो विचारलाई समर्थन गरेको छ, खुला बजारले ठूलो प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्दछ र रोजगारदाता र कामदार दुवैलाई थप छनोटहरू प्रदान गर्दछ र एक सुशासित र विनियमित प्रणालीमा विश्वास जगाउँदछ।
“FMM ले कामदारहरूको भर्तीको खुला, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणालीलाई समर्थन गर्दछ किनकि हामी रोजगारदाता र कर्मचारीहरू समान रूपमा प्रणालीको शिकार भएको चाहँदैनौं,” यसका अध्यक्ष सोह थियान लाइले भने।
“अन्तमा, भर्ती प्रणालीले रोजगारदाता र कर्मचारीहरूमा अनावश्यक लागत बोझ थोपर्नु हुँदैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले श्रमिक र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नका साथै रोजगारदाताहरूमा लगाइएका सर्तहरूमा निष्पक्ष हुने विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू पालना गर्नुपर्छ।